Mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub oo qarka u saaran in Liverpool ay ku garaacdo soo xero galinta Timo Werner – Gool FM
“Waan ku faraxsanahay inaan iska diiday Barcelona” – Xiddiga Kooxda PSG ee Angel Di Maria
Kooxda Real Madrid oo dalab weyn ka gudbisay mid ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga
Lautaro Martinez oo hal tallaabo u jira ku biirista kooxda Barcelona… (Maxaa soo kordhay? Maxaase harsan?)
Waa kuwee shaqsiyaadka ku dadaalay in Timo Werner uu u aqbalo ku biirista Chelsea… (Safarkii qarsoonaa ee halyeeyada Blues)
Cristiano Ronaldo oo gaaray darajo uusan abid gaarin ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara…(Waxa uu ku garaacay Lionel Messi)
RASMI: Xeerka baddellada ciyaartoyda ee horyaalka Serie A oo si ku meel gaar ah wax looga baddelay
Waqtiga uu billaaban doono wada hadalka heshiis kordhinta ee kooxda Barcelona iyo Lionel Messi oo la baahiyay
Wesley Sneijder oo kala taliyey Martínez arrimaha ku saabsan inuu ku biirayo kooxda Barcelona
Luka Modrić oo ka warbixiyay inuu Cristiano Ronaldo qarka u fuulay Mourinho dartiis inuu u Ooyo
Man United oo kula dagaalameysa kooxda ay dariska yihiin ee Man City saxiixa xiddig ka tirsan AC Milan
Mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub oo qarka u saaran in Liverpool ay ku garaacdo soo xero galinta Timo Werner
Dajiye May 19, 2020
(Yurub) 19 Maajo 2020. Shabakada “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay xaqiijisay in kooxda Inter Milan ay ku dhowdahay inay la soo saxiixato Timo Werner, marka la gaaro suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Magaca Timo Werner oo 24 jir ah ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo Liverpool, maadaama Reds ay muddo dheer isha ku heysay adeega ciyaaryahankan.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in Liverpool ay ku guuldareysan doonto lasoo saxiixashada Timo Werner, kaddib markii ay Inter Milan si xoogan ugu soo biirtay loolanka ay ku dooneyso inay ku soo xero galiso laacibka reer Germany.
Shabakada “CalcioMercato” ayaa sidoo kale waxay shaaca ka qaaday in Timo Werner uu doonayo inuu ku biiro kooxda Inter Milan, maadaama uu xiiseynayo inuu tijaabiyo waayo arag-nimo cusub, isla markaana uu ka ciyaaro horyaalka Talyaaniga.
Wararka ayaa waxay sidoo kale intaas ku sii darayaan in Timo Werner uu badelay go’aankiisa, isla markaana uu hadda doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Talyaaniga, sidaas darteed Inter ayaa ka faa’iideysan doonto arrintan si ay ula soo saxiixato sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaa xusid mudan in Timo Werner uu ka qeyb qaatay kooxdiisa RB Leipzig ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan 37 kulan, waxa uu dhaliyay 27 gool, halka uu sidoo kale sameeyay 12 caawin.
Cristiano Ronaldo oo markii ugu horreysay maanta ku soo laaban doona tababarka Juventus tan iyo karaantiilka
Halyeyga reer France ee Lilian Thuram oo si cad u sheegay xiddigii ugu adkaa ee uu kahor yimid